I-China i-A2FE160 i-180 ipompon yempompo yezahlulo ezinkulu i-Big Bearing T7FC070 abaxhasi kunye neFektri | Elephants Fluid
IHydraulic eDirectional Valve
Amacandelo eHydraulic Orbitrol Steering
Hydraulic Piston Pump abaza kuzisebenzisa
Hydraulic Vane Pump Kwaye Yiba nenceba
Rexroth Pump Iintetho
6E6474 fracturing Pump Buyisela iCartridge for Wheel Lo ...
Ikati ye-OEM yompompo yompompo yempompo ye-9T
1P40 IINKCUKACHA zemiyalelo ULAWULO valve 1SPOOL
I-F-201346 enkulu ethwele iRexroth A4VG125 ipompon pump
I-A2FE160 180 ipompon yompompo yamalungu amakhulu I-Big Bearing T7FC070
I-A2FE160 180 i-piston pump pump i-Big Bearing T7FC070, i-Elephant Fluid Power inikeza iibheringi zepompo ye-hydraulic, iibheringi zokuqala, ixabiso lisengqiqweni, kwaye liza kuthunyelwa kwiintsuku ezi-5.
Inxalenye ebalulekileyo yempompo yeplunger kukuthwala. Ukuba kukho ukudlala ekuthwaleni, ukucoca okuqhelekileyo kwezibini ezintathu zokungqubana ngaphakathi kwimpompo ye-hydraulic akunakuqinisekiswa. Kwangelo xesha, ukutyeba kwefilimu yeoyile ye-hydrostatic yesibini sokungqubana iya kutshatyalaliswa, ukunciphisa ukusetyenziswa kwempompo yeplunger. ubomi. Ngokwolwazi olunikezwe ngumenzi wempompo ye-hydraulic, ubomi obuphakathi bokuthwala ngu-10000h, kwaye kuyafuneka ukubuyisela izibuko elitsha ukuba eli xabiso lidluliwe. Iibheringi ezisusiweyo azinakufunyanwa ngaphandle kwezixhobo zovavanyo zobungcali, kwaye zinokuhlolwa kuphela. Ukuba imikrwelo okanye ukutshintsha kombala kufunyenwe kumphezulu weroli, kufuneka kutshintshwe.
Xa kutshintshwa iibheringi, ingqalelo kufuneka ihlawulwe ngoonobumba besiNgesi kunye neemodeli zeebheringi zokuqala. Uninzi lweebheringi zempompo yeplunger zisebenzisa iibheringi ezinkulu zomthwalo. Thenga umenzi wokuqala kunye neenkcukacha zokuqala. Ukuba ubuyisela olunye uphawu, kuya kufuneka unxibelelane nomntu onamava ngokuziphatha ukuze ajonge itafile kwaye atshintshisane, injongo kukugcina inqanaba lokuchaneka kunye nomthwalo wokuthwala.
Iimpompo ze-Axial plunger zinokusebenzisa isiguquli sokuhamba rhoqo ukugcina amandla ombane. Kwinkqubo yokwenyani yemveliso, iimpompo ze-axial plunger zihlala zisebenza phantsi koxinzelelo okanye ukuhamba ukuhamba ukulungisa imeko yokusebenza. Xa uxinzelelo lokwenyani lukhulu kunoxinzelelo olufunekayo, luhlengahlengiswa ngokusebenzisa ivalve yokunceda ukugcina uxinzelelo lwayo lokusebenza luzinzile kwaye iVevu yokunceda ikhulule ukugqitha. Imoto ibisebenza ngesantya esipheleleyo rhoqo, kwaye ukusetyenziswa kwamandla kuhlala kungatshintshanga.
Ipleyiti yevalufa ineefom ezimbini: ukuhanjiswa kokuhamba kwenqwelomoya kunye nokusasazwa kokuhamba okujikelezayo. Isibini sokungqubana kokuhanjiswa kokuhamba okujikelezayo kulungiswa ngokusila xa imikrwelo kwindawo yokuhambisa ukuhamba kwesilinda ingekho nzulu: xa indawo kumjelo wobuso bokusasazeka kwesilinda inzulu, igroove kufuneka igcwaliswe "bubuchwephesha bobunjineli bobuchwephesha "phambi kokusila Musa ukusila ngokungaboni ukuthintela umaleko wobhedu ekunciphiseni okanye ukuvuza kweoyile kwisiseko sensimbi.
Xa usebenzisa ukuphuphuma ukulungelelanisa uxinzelelo kunye nokuhamba, okunye okugqithisileyo kuphuphuma kubuyela kwinkqubo yoqobo, kukhokelela kumandla angenamsebenzi ompompo weplunger kunye nokusebenza okuncinci kokusebenza. Ukuba kusetyenziswa inverter yokonga umbane ye-Chuangjie, ivelufa yokuphuphuma ingasetwa ivaliwe, ngokusebenzisa inverter yokonga umbane ngokwayo ihlengahlengisa ngokuzenzekelayo uxinzelelo lokusebenza ukugcina uzinzo koxinzelelo lokusebenza, kwaye ilandelele ngokuzenzekelayo uxinzelelo lwesixhobo. Qaphela ulawulo oluzenzekelayo, ngaloo ndlela kugcinwa ukusetyenziswa kwamandla. Olona ncedo lukhulu kule ndlela yohlengahlengiso kukuba inokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwempompo ye-axial piston, kunye nefuthe lokonga amandla linokufikelela ngaphezulu kwe-30%.
Molo, Element Fluid Power liqela elikumgangatho ophezulu elinamandla obuchwephesha, elinikezela ngemveliso ekumgangatho ophezulu, izisombululo ezigqibeleleyo kunye neenkampani zenkonzo yokuqala zobuchwephesha kubasebenzisi. Inkampani ibambelela kumgaqo wokuseka ishishini ngokunyaniseka, ukugcina ishishini ngomgangatho, kunye nokwenza inkqubela phambili. Iyaqhubeka nokunyuka iincopho ezintsha ngesantya esomeleleyo kwaye inegalelo kumzi-mveliso kazwelonke wokuzenzekelayo. Wamkele abathengi abatsha nabadala ukuba bathenge iimveliso abazithandayo ngokuzithemba. Siza kukukhonza ngentliziyo epheleleyo!
Okulandelayo: I-F-201346 enkulu ethwele iRexroth A4VG125 ipompon pump
F-201346 ukuthwala enkulu Rexroth A4VG125 piston ...